बाँदरको यस्तो ग्याङ, जसले जाउँका कुनै युवतीलाई बिहे गर्न दिँदैन !
पटना, २७ मंसिर । विवाहका लागि आएका जन्तीलाई घर-गाउँले, केही उच्छृङ्खल युवक तथा लुटेराहरुले आक्रमण गरेको र खेदेकोजस्ता घटना त बेलाबखत सुनन्मा आउँछ । तर, बाँदरले जन्तिलाई हमला गरेको र गाउँबाटै खेदेको कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? अब सुन्नुहुन्छ ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँका युवतीहरु बाँदरकै कारण विवाहबाट बञ्चित हुनुु परिरहेको छ । यो अनौठो घटना भारतको पटनाबाट ७५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको रतनपुर गाउँको हो ।
भोजपुर जिल्लामा अवस्थित यस गाउँमा बाँदरको आतङ्क यतिसम्म बढेको छ कि जसका कारण सो गाउँमा जन्ती लिएर जान सबै डराउँछन् । यस गाउँको बारेमा आसपासमा निकै नै नराम्रो हल्ला चलेको छ ।
हल्लामात्रै होइन, यथार्थ पनि त्यस्तै छ । यो खबर सार्वजनिक हुनुभन्दा एक साताअघि सो गाउँमा ब्याण्ड बाजासहित एक बरियात जन्ती गएको थियो । उनीहरु बाजाको तालमा झुमिरहेका थिए । त्यसै समयमा एक्कासी बाँदरको हुल आएर हमला बोल्यो । केही समय त सबै मिलेर बाँदरको सामना गरे । तर, हुल अझै थपिएर बबाल मच्चाउन थाल्यो । केही नचलेपछि सबैले भागेर ज्यान जोगाएको भारतीय अनलाईन जागरण जंसनमा खबर छ ।
यो बाँदारको ग्याङ कुनै खुँखार डाँकाको समूहभन्दा कम छैन । सोही ग्याङका कारण कोही पनि आफ्नो छोराको विवाह यस गाउँमा गराउन चाहँदैनन् । सोहीकारण रतनपुर गाउँमा युवतीहरुको विवाहमा बाँदरले ग्रहण नै लगाईदिएको छ ।